[Umbono] Ingqalasizinda Nemisebenzi Yokufakazela ubuqiniso - Amanethiwekhi we-SME | Kusuka kuLinux
phico | | KusukaLinux, I-GNU / Linux, Kunconyiwe, Amanethiwekhi / Amaseva
Okuningi kwendatshana ezingamashumi amabili ezingajwayelekile ezishicilelwe kuze kube manje ochungechungeni Amanethiwekhi we-SME, bakhulelwa ngendlela yokuthi bafinyelele kuleli phuzu ngokuqonda okucacile ngokubaluleka okubalulekile kwezinsizakalo ze-DNS ne-DHCP - ngaphandle kokukhohlwa i-NTP - ye-Business Network.
Njengoba sichazile kuma-athikili adlule, lezi yizinsizakalo ezibalulekile - ikakhulukazi i-DNS - yanoma iyiphi inethiwekhi. Kuyiqiniso ukuthi asizithinti ezinye izinhlelo ezifana ne-NSD noma igama eligunyaziwe leseva elisetshenziswa kakhulu kumaseva we-Root DNS nokuthi lingasebenza esimweni Sezindawo Ezithunyelwe Ngaphansi kwesibopho sethu.
Ukube besingazinikeli umzamo omkhulu nesikhathi ezihlokweni ezedlule, manje bekuzodingeka sichaze ngasinye sazo ngendlela ephoqelekile. Yingakho ke kubalulekile Kwabafikayo kuma-SME Networks, funda futhi ufunde izindatshana ezingemuva. Ngaphandle kokuzifunda, uzoba nezikhala eziningi nemibuzo engeke siyiphendule ngokuzayo. 😉
Ezweni lakithi -Cuba- kuyinto ejwayelekile ukuthi, lapho i-Network Administrator noma i-Computer Scientist enikezwe umthwalo wokuthumela inethiwekhi entsha kunoma iyiphi i-SME, ngaphandle kokucabanga kabili ifaka izinsiza ze-Infrastructure and Authentication ezincike kwi-Microsoft® Active Isikhombi®. Akufanelekile ukuthi i-SME inamaqembu ayi-15 noma ayi-1500. Bafaka iMicrosoft Active Directory 2008, 2012, noma "inguqulo yakamuva" yabo ngaphandle kokucabanga ngayo.
Awunawo umqondo ovamile - okuncane kakhulu kwezinzwa - ukuhlola noma ukwazi ezinye izindlela.
Angenzi ihaba lapho ngigomela lokhu okungenhla, yize muva nje nangaphansi kwengcindezi yokuphatha, bafuna ukuthi kufakwe iZentyal®, okuyi-software yangasese enikeza i-Community Version kwesinye isikhathi eshiya okuthandekayo. Nginesiqiniseko sokuthi izinhlobo ezikhokhelwayo ziphakeme kakhulu, futhi kule bhulogi enikezelwe kwiFree Software kufanele sibonakale ngokusobala ngangokunokwenzeka futhi siveze umbono wethu ngokuya ngomkhuba esiwuthatha njengombandela omuhle weqiniso.
Ngiyazi amacala okwehluleka ngokwengxenye noma okuphelele lapho sebesukile eMicrosoft baya eZentyal. Futhi ukuthi ukuthatha lokho kweqa kufanele uzilungiselele kahle futhi ube nolwazi nge-Free Software. Ngiyazisa kakhulu imibono yozakwethu nomngani wami isihlibhi oshiye umbono onesibindi ngoZentyal kulesi sihloko Bopha futhi Active Directory® - SME Networks, ongayifunda.
Ngabhala izindatshana eziningana nge I-ClearOS 5.2 Service Pack 1, isixazululo esihle kakhulu sokuthi ngesikhathi saso sathola imiklomelo eminingi ye-Best Free Software, engisilandele ngaze ngafunda i-athikili I-ClearOS 6.3 iyaziwa nguNkulunkulu, Qhubeka Usebenzisa i-5.x. Inqubomgomo ngeshwa I-ClearCenter, inkampani encane ezinikele ekwenzeni i-ClearOS -kanye nezinye izinhlelo- ukuvala zombili izinhlobo Community kwemikhiqizo yabo. Kodwa-ke, angiyekanga ukubheka i-ClearOS kuze kube yinguqulo yayo engu-7.2. Eqinisweni, ngibe ne-ClearOS 5.2 ekukhiqizeni iminyaka engaphezu kwengu-4, nginamakhasimende e-Windows azo zonke izinhlobo nangamakhompyutha angaphezu kwama-60.
Kwinkampani yangasese, into esemqoka inzuzo. Kunengqondo! Okwenzekayo ukuthi, kwesinye isikhathi, ababoni ngokuphelele ububanzi bezinqumo ezisuselwa kuzonjengakulowo mbandela owodwa. Uma uhlose ukuvuna, ukuhlwanyela. Bona iRed Hat ngesibonelo sokuthi wenzeni.Ngokusobala, i-ClearOS isuselwe ohlelweni lokusebenza lwe-CentOS / Red Hat
, kepha ngokusobala hhayi esibonelweni seRed Hat Company kanjalo. Uyahamba futhi iRed Hat uyithenga ngolunye usuku uma kusemgqeni wakhe wokuthakazelela ukubhekana neMicrosoft, inkinga engabonakali -ngokomzuzwana- ngenxa yentshisekelo yakhe emakwe ku-389 Directory Server yakhe engavunyelaniswa neMicrosoft I-Active Directory indlela eya kumabhidi amabili.
Mhlawumbe kuze kube manje sengikhulume ngezinhlelo ezintathu kwezine engizama ukusho ukuthi zisetshenziselwa kakhulu insizakalo yengqalasizinda nokufakazela ubuqiniso kuma-SME Networks amaningi:
I-Microsoft Active Directory
I-ClearOS - I-PDC esekwe ku-Samba
I-Zentyal - Uhla lwemibhalo olusebenzayo olususelwa kuSamba
Futhi uma sibheka kahle, BONKE babhekiswe kuMicrosoft Networks! Izinga le- I-Facto -okusho ukuthi kungcono kakhulu ngokwawo- yiMicrosoft Network. Kungakhathaliseki ukuthi siyayithanda noma cha, noma ngabe siyalwa nayo noma cha, kuyiqiniso esingakwazi futhi esingafanele ukuliziba.
Labo abaphethe ukusebenzisa nokusebenzela ama-SME Networks abakwazi ukungakunaki lokhu.
Ngicabanga ukuthi njengamanje akekho umuntu oyimfihlo ngokushoda Kobumfihlo Okukhulu okuhlukunyezwe yizinhlelo zokusebenza zeMicrosoft, okuqinisekiswa kalula ngokufunda imibuzo ye-DNS eyenziwe yizinhlelo zabo zokusebenza - kuchazwe ezindatshaneni ezedlule ngesihloko se-DNS ne-DHCP- lapho sakha imibuzo ungene ngemvume.
Kubukeka sengathi abasebenzisi bokugcina abaningi abasebenzisa uhlelo oluthile lokusebenza lweMicrosoft abakayiboni i- amabhayisikobho AmaMelika «Kungasebenza Imigomo Nemibandela -2013"; "Isithwathwa -2016»Kusuka kumqondisi omuhle kakhulu Oliver Stone; njll. kanye nokufunda izindatshana eziningi maqondana nendaba eshicilelwe ku-Intanethi.
Sawubona futhi Sawubona, le bhulogi inikezelwe ku-Free Software. Akukho okunye. Futhi uma bengenayo inkumbulo embi kakhulu, bazokhumbula lapho iMicrosoft ibiza uStallman ngo ... Nokho, manje IMicrosoft Loves Linux. Waze wakhipha i- inguqulo ye-Microsft SQL Server yakho engafakwa kuRed Hat. Yisibonelo esisodwa nje sokukhohlakala kwengqondo izinkampani ezinamandla ngempela ezingasibeka kukho ngokuya ngezintshisekelo zazo zezomnotho. Namuhla ngiyakuzonda futhi kusasa ngiyakuthanda. Konke kuncike ekutholeni imali.
Yize abaningi bengase bangakukholwa, umgwaqo oya ezinsizakalweni zengqalasizinda kanye nokufakazela ubuqiniso uhamba kuwo wonke ama-nooks wangaphambilini kanye nama-crannies, futhi ngicabanga ukuthi kunempilo ukugudluza kancane amathambo alabo abazimisele ukungiphelezela kulolu hambo. Uma ufuna ukwazi isibonelo esiphilayo samasu we-Microsoft Corporation enamandla, qhubeka kusayithi I-linux kakhulu Umbhalo ka-Eduardo Molina, FSFE: "Igama lokugcina alikakhulunywa eMunich", nayo yonke imibhalo yangaphambilini ephathelene nendaba, ishicilelwe kuleyo bhulogi esezingeni elihle kakhulu.
Njengoba kushiwo Morpheus a Neo ku-movie engenakugwemeka «Matrix": Vula ingqondo yakho!.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » KusukaLinux » [Umbono] Ingqalasizinda Nemisebenzi Yokufakazela Ubuqiniso - Amanethiwekhi we-SME
I-athikili ecacile, ebalulekile necindezelayo. Ngiyabonga futhi ngesikhathi sakho nomzamo wakho osinikeze wona.
I-athikili nayo iyathakazelisa kakhulu ngoba ichaza ulwazi lokuthi ama-sysadmins asondela kanjani ekuphathweni kwamanethiwekhi.
Kubaluleke kakhulu ukwazi umbono ongathandeki nhlobo ovezwa ngokuqaliswa kweZentyal njenge-PDC + AD.
Sawubona IWO! Ngiyacacisa ukuthi umbono oveziwe umayelana nenguqulo yoMphakathi iZentyal, awuyikhokhi, ngoba angikaboni owokugcina. Ngiyazi ngokuxhumana nawe ukuthi ucabangela ukufudukela kwi-Free Software. Ngikuphakamisa ukuthi ulinde kancane ukuthi singene ekusebenziseni i-Active Directory - Domain Controler "AD-DC Samba 4.51".
UJarvis: Umsizi Womuntu Ovelele WeLinux